अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प महिला पत्रकारमाथि भड्किए – Nepalkakura
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प महिला पत्रकारमाथि भड्किए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा आइतबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा महिला पत्रकारमाथि भड्किएका छन् ।
सीबीसी न्यूजकी ह्वाइट हाउस संवाददाता विजिया जिआंगले ट्रम्पलाई उनले अमेरिकी जनतालाई कोरोनाभाइरसको संक्रमणबारे पहिले नै किन चेतावनी दिनुभएन भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन् ।
प्रश्नपछि ट्रम्पले विजियालाई सोधे, ‘तपाईं को हो ?’
विजियाले आफ्नो परिचत दिएपछि ट्रम्पले भने, ‘मानिसहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ तर मानिसहरु यसबारे कुरा गर्न चहिरहेका थिएनन् ।’
त्यसपछि विजियाले भनिन्, ‘अमेरिकी जनताले तपाईंबारे ठ्याक्कै यस्तै कुरा गरिरहेका छन् । तपाईंले मानिसहरुलाई त्यतिबेला नै चेतावनी दिनुपर्दथ्यो जब भाइरस डढेलोजस्तै फैलिरहेको थियो । त्यतिबेला फेब्रुअरीमा तपाईं हज्जारौं व्यक्तिसँग –याली गरिरहनुभएको थियो । तपाईंले यत्रो समय किन लगाउनुभयो ? तपाईंले मार्च १६ अघि नै सामाजिक दुरीको नियम किन लागू गर्नुभएन ?’
यसको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘मैले चिनियाँहरुलाई अमेरिका आउन रोकेको थिएँ ।’
यसमा विजियाले उनलाई भनिन्, ‘चिनियाँलाई मात्रै । सबैलाई होइन । चीनबाट फर्कने अमेरिकीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएन ।’
अब ट्रम्पले भिजियालाई रोक्दै भने, ‘यो बुझ्न सजिलो छ… रिल्याक्स… आफ्नो स्वर सानो बनाउनुहोस् । तपाईंले यो भन्नुहोस् कि जब मैले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएँ तब अमेरिकामा संक्रमणका कारण कतिजनाको मृत्यु भएको थियो ? तपाईंले यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ त्यतिबेला एकजनाको पनि मृत्यु भएको थिएन । तपाईंले मलाई मेरो सही निर्णयका लागि धन्यवाद भन्नुपर्छ ।’
गत हप्ता पनि ट्रम्प सीबीएस न्यूजकी अन्य महिला पत्रकारमाथि भड्किएका थिए ।
पला रेडले ट्रम्पलाई उनले फेब्रुअरीमा संक्रमण रोक्नका लागि कस्ता कदम उठाएका थिए भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन् । जवाफमा ट्रम्पले पलालाई ‘फेक’बताउँदै आफूले फेब्रुअरीमा धेरैभन्दा धेरै कुरामा पहलकदमी गरेको बताए ।
Previous नोबेल कोरोनाभाइरस पहिचान गर्नका लागि एउटा नयाँ एन्टिबडी परीक्षण विधिको विकास
Next बेलायतमा कोभिड १९ परास्त गर्ने श्रीमान श्रीमती
आर्मेनिया र अजरबैजान युद्धमा होमिए, २३ जनाको मृत्यु
भारतीय सरकारमा मन्त्री बनेका जसवन्त सिंहको निधन
कालीमाटीमा ३९ वर्षीय पुरुष मृतावस्थामा फेला
13 mins ago nepalkakura
प्याराग्लाइडिङबाट खसेका एकजना युवकको उद्धार
२४ घण्टामा काठमाडौ उपत्यकामा थप ८१७ जनामा कोरोना संक्रमण
२४ घण्टामा थप १३५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि